अभिनेत्री एवं समाजसेवी स्वेता खड्का माछापुच्छ्रे बैंकको ब्रान्ड एम्बासडर - Complete Nepali News Portal
अभिनेत्री एवं समाजसेवी स्वेता खड्का माछापुच्छ्रे बैंकको ब्रान्ड एम्बासडर
काठमाडौं । देशभरका आफ्ना १५९ वटा शाखा, १३४ शाखारहित बैकिङ सेवासमेत गरी जम्मा २९३ स्थानमा रहेका सेवा सञ्जाल तथा १९८ वटा एटीएमहरु तथा १ हजारभन्दा बढी पिओएस मेसिनमार्फत् ग्राहकलाई बैकिङ सुबिधा प्रदान गरिरहेको अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्दै आएको माछापुच्छ्रे बैंकले अभिनेत्री, सफल ब्यबसायी एवं समाजसेवी स्वेता खड्कालाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्त गरेको छ । बैंकले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धनको लागि खड्कालाई एम्बासडरमा नियुक्त गरेको हो ।
माछापुच्छ्रे बैंकको लाजिम्पाटस्थित कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला तथा नायिका खड्काले संझौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
अभिनेत्री, समाजसेवी, एबं सफल व्यवसायीका रुपमा राम्रो छवि बनाउन सफल खड्काको माध्यमबाट समाजका हरेक तह र तप्कासम्म बैंकको पहुच पुग्ने बिश्वास बैंकले लिएको छ ।
नायिका स्वेता खड्का लेख्नु हुन्छ : बलात्कारी र भ्रस्टाचारीलाई फाँसी दिईयोस् ..
सुर्खेतकि ४ वर्षिया बालिका बलातकृत भएको यो समाचार सुनेर म नि:शब्द भएकी छु ।
२४ वर्षिया युवकले एउटी अबोध बालिका माथि गरेको यो कु-कृत्यले मेरो मनमा एक प्रकारको आक्रोश, घृणा र क्रोध उत्पन्न गराएको छ । त्यो पापिको गालामा एक चड्कन हानेर क्रोधको यो ज्वालालाई कम गर्ने इक्षा जागेको छ ।
अहिले हाम्रो समाजमा बलात्कारका थुप्रै घटनाहरु देखा पर्न थालेका छन् । ७० वर्षिया बृद्दा देखी ३ वर्षिया बालिकासम्म बलात्कारको शिकार भएको घटनाहरु पढ्दा र सुन्दा अचम्म लागेर आउँछ । दिनानुदिन सिक्षितहरुको संख्या बढ्दै जाँदा यस्ता घिनलाग्दा घटनाहरु पनि बढीरहेका छन् । हाम्रो शिक्षा र संस्कारले के सिकाउँदै छ ?
बलात्कार र भ्रस्टाचारको अपराध एउटै हुन् । बलात्कारीले नारिको अस्मितालाई लुटिरहेको हुन्छ भने भ्रस्टाचारीले पुरै देशको अस्मितामाथी खेलिरहेको हुन्छ । जबसम्म भ्रस्टाचारी र बलात्कारीलाई फाँसीको सँजाए हुन्न तबसम्म यि दुबै अपराध रोक्किने छैनन् । अत: यो संबिधानको धारामा भ्रस्टाचारी र बलात्कारीलाई फाँसी दिने कानुन थप्नको लागि म नेपाल सरकार समक्ष ब्यक्तिगत रुपमा आग्रह गर्दछु । नत्र २४ बर्षिया यि बलात्कारीले २० बर्षको सँजाय मात्र पाउने हो भने उस्ले आफ्नो कैद ४४ बर्षको उमेरमा काटीसक्नेछ र उ रिहा भएर फर्कँदा ४ वर्षिया यी बालिका २४ बर्षको हुनेछिन । अब भन्नुस्, बलात्कारको सँजाय काटेर रिहा भएको त्यो अर्धबैंशे बलात्कारी र २४ वर्षिया ती बलात्‍कृत युवतीले एउटै समाजमा कुन रुपमा जीवन बिताउने ? के यस्तो सँजाय ले अहिलेकी बलात्‍कृत बालिकालाई साँच्चिकैको न्याय मिल्ला ?? अपराध सुहाँदो सँजायको ब्यवस्था गर्न सरकार किन चुकेको ??? यस् प्रती हामी सबैले ध्यान पुर्‍याउने बेला आईसकेकोछ ।
अन्तमा, म सुर्खेतकी ति अवोध बालिका प्रती साहनुभुती बाहेक के नै ब्यक्त गर्न सक्छु र ! यी अबोध बालिकालाई न्याय दिलाउनको निमित्त यौनपिपासु त्यो बलात्कारी युवालाई फाँसीको सँजाय दिएर एउटा नजिर कोर्न सके अन्य बलात्कारीहरुको मनमा डर पैदा हुने थियो र यि अबोध बालिकालाई साँच्चिकै न्याय मिल्ने थियो ।